Ny Brussels Airlines dia namindra ny lalan'i Moskoa nankany amin'ny seranam-piaramanidina hafa
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Brussels Airlines dia namindra ny lalan'i Moskoa nankany amin'ny seranam-piaramanidina hafa
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Vaovao Mafana Rosia • Fitaterana • Travel Wire News
Ny alahady 2 jona dia nanamarika ny fanombohana sidina mivantana avy any Bruxelles mankany amin'ny seranam-piaramanidina Sheremetyevo any Moskoa amin'ny alàlan'ny Brussels Airlines. Nilaza ny Brussels Airlines fa namindra ny làlamben'i Moskoa mankany Sheremetyevo izy satria ny seranam-piaramanidina dia "isan'ny safidy voalohany amin'ireo mpandeha orinasa."
Mikasika ny fifindra-monina, nanambara ny Brussels Airlines fa seranam-piaramanidina manintona i Sheremetyevo noho ny akaikin'ny afovoan'i Moskoa.
Alexander Ponomarenko, filohan'ny filankevi-pitantanan'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Sheremetyevo, dia nanambara hoe: "Faly miarahaba antsika Brussels Airlines ho any Sheremetyevo. Ny fanapaha-kevitr'ilay kaompaniam-pitaterana hanidina ny zotra dia porofon'ny fampandrosoana fotodrafitrasa izay nataontsika tao anatin'izay taona vitsy lasa izay tao amin'ny SVO. Rehefa manatsara sy manitatra ny Sheremetyevo mifanaraka amin'ny drafitra fampandrosoana izahay dia manantena ny handray ireo mpitatitra fanampiny any Sheremetyevo. ”
Sheremetyevo dia niarahaba tamim-pifaliana ny sidina Brussels Airlines voalohany. Nandritra ny fankalazana ireo kolontsaina roa ireo, ny mpandeha sy ny ekipa tonga dia notsidihin'i Smurfs sy andiana mpandihy Rosiana.
Ny hetsika sidina fanokafana dia natrehan'i Denis Pashkovsky, Tale Jeneraly lefitra, hetsika ara-barotra, seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Sheremetyevo; Anna Zakharenkova, Lehiben'ny Fifandraisam-bahoaka, Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Sheremetyevo; HE Jean-Arthur Regibeau, Ambasadaoro miavaka sy Plenipotentiary an'ny fanjakan'i Belzika mankany Russia; solontenan'ny Masoivoho Belzika; Oleg Prozorov, Tale jeneralin'ny Tranoben'ny varotra Belzika-Luxembourg any Russia; ary Anton Melnikov, solontenan'ny visit.brussels.
Tonga ara-potoana ny sidina araka ny fandaharam-potoana.
Ny sidina avy any Sheremetyevo mankany Bruxelles ao amin'ny Brussels Airlines dia manomboka amin'ny Alatsinainy, Alakamisy, Zoma ary Alahady amin'ny 16.10. Manomboka ny 29 Jona dia hisy sidina sabotsy ihany koa mankany Bruxelles amin'ny 19.40.